IINGCAMANGO EZI-15 EZIMNYAMA NEZIMHLOPHE ZEGUMBI LOKUHLAMBELA (IMIFANEKISO YOYILO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iingcamango ezi-15 eziMnyama neziMhlophe zeGumbi lokuhlambela (Imifanekiso yoyilo)
Le galari yezimvo zangasese ezimnyama nezimhlophe zibonisa uyilo kwiindlela ezahlukeneyo. Xa uhombisa igumbi lakho lokuhlambela ngombala omnyama nomhlophe kubalulekile ukuba wenze ibhalansi efanelekileyo ukuqinisekisa ukuba igumbi alikho mnyama kakhulu okanye aloyikisi iingqondo. Nazi ezinye zeendlela ezithandwayo zokuyila zangaphakathi ezisebenzisa umbala omnyama nomhlophe onemixholo yokwenza izindlu zokuhlambela ezimemayo.
Igumbi lokuhlambela elimnyama nelomhlophe elikwisithombe esingentla sithatha i-Art Deco yanamhlanje ngokudibanisa iphalethi ye-achromatic kunye neepateni zale mihla kunye neziqwenga zodidi. Indibaniselwano ibonelela ngumahluko olungileyo wokuthungwa kunye neefom. Udonga lubonisa iithayile eziphezulu zeceramic kunye neepateni zoncedo ezisezantsi, ezilinganisa inkangeleko yephepha lodonga. Umgangatho ucoceko olucwangcisiweyo lwe-30 × 30 iithayile ezimnyama nezimhlophe ezichaseneyo nendawo yokuhombisa ephezulu yodongwe. Isilingi kunye neziqwenga zokugcina konke kugqityiwe kumhlophe nge-matte, kwaye isitulo esinezihlalo esinezinto ezinemigca sinceda ukuthambisa ukujonga konke. Okokugqibela, i-sconces yodonga kunye ne-chandelier inika ukujonga ngakumbi ukuthandana kwindawo.
Le yindawo yokuhlambela efanayo nale ingentla evela engile eyahlukileyo. Kukho intaphane yeenkuni kunye neeyunithi zokugcina iintsimbi zelineni kunye nezinye izinto zangasese. Ukusuka kweli nqanaba unokujonga ngcono indawo yokuhombisa yeVictoria ephindwe kabini emnyama kunye nomhlophe webhafu yohlamba ibhafu ngebhanti ye-chrome.
Le ndlu yangasese yanamhlanje kunye nebhafu isebenzisa iithayile zodongwe zase-Italiya zombini imigangatho kunye neendonga. Isiqingatha sodonga sigqityiwe ngepeyinti emhlophe ebengezelayo, eyenza ukugqitywa kwale ndawo yokuhlambela kube noqoqosho ngakumbi. Ikwanazo izinto ezilula ezimhlophe zeceramic zokuhlambela ezinemiphetho egobileyo ethambisa ukujonga okunzima komgangatho. Ukusetyenziswa kwebhafu yokuhlambela kunye nendawo yokuhlambela ikwaphawuleka njengoko kunceda ukwandisa indawo yokuhlambela.
Igumbi langasese le-Art-Deco Glam yangoku eliqhayisa ngesitayile kodwa ingagqithisi ngezinto ezingafunekiyo. IPalette inezinto ezimhlophe ubukhulu becala (zodonga, isilingi kunye nezinto ezibunjiweyo) kunye nomnyama omenyezelayo njengoko kubonwe kwimpahla yokuhlambela yeceramic. Iipompo ezigqityiweyo zegolide kunye nezinto zokuhlambela nazo zongeza kubuhle beli bhafu. Eyona ndawo kugxilwe kuyo le bhafu, kodwa ziitayile ezintle zeglasi eludongeni ngasemva kwento engento.
Igumbi lokuhlambela eliphefumlelweyo leZen lisebenzisa umbala wombala obonakala kubo bobabini nabasetyhini. Uyilo lusebenzisa imigca ecocekileyo kunye neefom zejiyometri, ezibonakala kwizinto zangasese ezisetyenzisiweyo. Umgangatho ophambili usebenzisa iithayile zomgangatho wokhuni, kunye neendawo eziphakamileyo ezikhokelela kwishawari kunye nebhafu isebenzisa iithayile zeceramic ezimnyama ezingwevu. Iindonga zigqityiwe ngeethayile ezingwevu ezifudumeleyo, ezigxininiswe ziithayile zeceramic ezinepateni yeentyatyambo kunye neethayile ezibomvu ze-1-red, ezigqibezela inkangeleko yokuhlamba.
Uyilo olulula nolwanamhlanje lokusebenzisa iithayile zegranite emnyama emnyama kwindonga yokuhlambela / yeshawari enika ukubonakala okuhle okucwebezelayo. Zonke ezinye iindonga zipeyintwe kwipeyinti ekhazimlayo esisiqingatha, kwaye isebenzisa iithayile zeceramic ezimhlophe ezingama-30 × 60 phantsi. Imabula emnyama eludongeni lwendawo yokuhlambela ikwabonelela ngesandi esihle kule ndawo yokuhlambela ilula.
Iingcamango ezimnyama nezimhlophe zokuhlambela ezixhomekeke kukuhonjiswa kunye nezixhobo zezinye zeendlela ezilula zokuphumeza esi sitayile ekhayeni lakho. Indawo ekujongwa kuyo le ndlu yokuhlambela ibhafu yeenyawo zenyawo ezimnyama namhlophe. Igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo lisenza sikhanye ngokukhanya kwendalo kwaye linika umsebenzisi imbonakalo entle yendawo yegadi ngefestile yayo enkulu kakhulu. Ibhafu ikakhulu imhlophe- ngethayile emhlophe yethayile yodonga kunye neendonga, kunye nophahla olumhlophe olucocekileyo- olunceda ekwenzeni ikhangeleke iphangalele ngakumbi. Izibuko ezikhulu ngaphezulu kwekhawuntara le-marble emnyama zikwanceda ukusasaza ukukhanya kunye nokwenza indawo yokukhanya.
Indlu yangasese yangoku ye-eclectic ebonisa izinto zangasese ezineefom kunye neemilo ezingaqhelekanga. Le ndlu yokuhlambela ibaluleke kakhulu kwindibaniselwano yayo eyahlukileyo yeepateni kunye nemibala ekhumbuza kakhulu uyilo lwasempuma-mpuma. Imigangatho ziithayile ezingama-60 × 60 ze-matte kwi-matte mocha, ngelixa iindonga zisebenzisa iithayile zeceramic ezimnyama ezinokuhombisa okuphezulu kunye neepateni ezahlukeneyo zegolide. Kukho udonga lwe-aksenti olusebenzisa isitayile esinye seethayile, kodwa mhlophe ngeepateni zesilivere zesetyhula. Enye into enomdla kule bhafu kukusetyenziswa kwentsimbi engenasici phakathi kweethayile endaweni yegrout eqhelekileyo.
Le bhafu yakudala yelizwe idibanisa izinto zakudala ezineenkcukacha zangoku. Yomibini imigangatho kunye neendonga zifakwe ithayile nge-30 × 30 ye-empress eluhlaza kwiitayile zendalo. Indawo enkulu yamampunge igqityiwe ngombala omhlophe ukunceda ukwenza indawo ibonakale ikhanya ngakumbi, kwaye umphezulu wayo omnyama weemabhile ugcwalisa iipateni zemithambo kwiithayile zomgangatho nasezindongeni. Indawo yokuhlambela indawo ebiyelweyo isebenzisa iglasi engacacanga kakhulu, kwaye zonke izixhobo kunye nezinto ezisetyenzisiweyo ziyilo loyilo ekugqityweni kwe-chrome.
Uyilo lwala maxesha lokuhlambela lukhangeleka lucocekile kwaye lubanzi ngokusetyenziswa kweethayile zelitye lekalika eludongeni lwayo, zidityaniswe nepeyinti emhlophe emenyezelayo, nto leyo edala indawo enombala oqaqambileyo. Imigangatho iqulethe iithayile ezinkulu ezimhlophe zeceramic, kwaye ngaphakathi kwisakhelo esinefreyimu engaphantsi kwesakhelo, udonga luchaphazelwe kusetyenziswa ukusika okukhulu kweethayile zegranite emnyama.
Olu luyilo lwala maxesha lokuhlambela olunempembelelo encinci yaseAsia. Uninzi lwemigangatho kunye neendonga zigutyungelwe yi-30 × 30 iithayile ezimhlophe zeceramic, oku kudityaniswe neethayile zombala omfusa ngombala othe tyaba / ipateni kunye neethayile zomda omfusa-mhlophe-beige phezulu. Ikwanayo nesibuko esikhulu esingaphantsi kwesakhelo, kunye nesiboniso somthi kunye neshelfu yokugcina. Ukugqibezela inkangeleko ephefumlelweyo yaseAsia, ibhokisi encinci yezityalo yayizindawo kwikona yegumbi lokuhlambela.
Olu luyilo lwamva lokuhlambela lwangoku lubonisa izinto ezincinci kakhulu, ezigxininisa kwifom yokuhlambela ngokwayo. Isebenzisa kuphela iintlobo ezimbini zeethayile zeceramic kuwo omabini imigangatho kunye neendonga: 30 × 30 iithayile ezimhlophe zeceramic kunye neetayitile ezingama-30 ezingwevu ezingwevu ezimnyama. Iimpawu zokufaka isilingi zikwathayile zisebenzisa iithayile zekreyiki ezingwevu, kwaye isilingi ephambili ipeyintwe umthunzi ofanayo wegrey. Ukulungiswa kukwangoku okwangoku, ubukhulu becala kukugqitywa okumhlophe kwekheram kunye nokugqitywa kwe-chrome koompompo, izibambo kunye nezixhobo.
Le ndlu yokuhlambela isitayile sendoda esinezi mini. Uninzi lweendonga nophahla zigqityiwe ngepeyinti emhlophe ecacileyo, kwaye iithayile ezisetyenzisiweyo zikwisithunzi esimnyama kakhulu. Umgangatho usebenzisa iithayile ezimnyama zemosaic (malunga ne-1 x1 ukuya kwi-2 ″ x2 ″) ngombala omnyama ongwevu. Kwezinye iindonga, kusetyenziswa iithayile zendalo ezingwevu ezimnyama ezingama-30 × 60, kwaye kwindawo yeshawari, kusetyenziswa iithayile zokuhombisa zentsimbi ezizodwa ezizodwa ezizodwa.
Le ndlu yangasese lolunye uyilo lwangoku oluncinci, olusebenzisa imibala emithathu ephambili kunye nombala o-1 ocacileyo. Iithayile eziphambili zomgangatho kunye nodonga ezisetyenzisiweyo ziithayile ezinkulu ezingwevu zeceramic kunye neepateni zezinto eziphilayo, udonga olusemva kwegunjana lamanzi lisebenzisa isitayile esifanayo kwiithayile kwibala elikhanyayo kakhulu. Inezinto ezibonakalayo zokubeka umgangatho, ezisebenzisa iithayile ezimhlophe zeceramic. Ibhafu ibambathiswe ngombala omnyama oqinileyo omnyama, kwaye ikhawuntari ye-vanity isebenzisa izinto ezifanayo ezomeleleyo ngombala o-orenji oqaqambileyo.
Le ndlu yokuhlambela yanamhlanje igcina kugqityiwe - iindonga kunye nesilingi zipeyintwe ezimhlophe, imigangatho isebenzisa iithayile zeceramic eziphezulu ngombala omnyama nomhlophe ezazisikwe ukuze zilandele iphethini ethile. Indawo yonke yeshawari ifakwe ithayile ngokusebenzisa iithayile ezimnyama zeceramic, kwaye indawo ebiyelweyo yokuhlambela isebenzisa iglasi engafakwanga bubushushu. Yintoni enika eli gumbi lokuhlambela ngakumbi ngumbala omnyama nomhlophe oqinileyo-wobuso ojikeleze ityhubhu, kunye neetayile ezimnyama nezimhlophe ezijikeleze indawo yeshawari, enika ukujija okunomdla kuyilo olulula lokuhlamba.
Izimvo ezincinci ezincinci kunye nezimhlophe zokuhlambela zixhomekeka kakhulu kwimibala kunye noburhabaxa bokuyila kwazo. Uyilo lwale mihla lokuhlambela oluncinci lusebenzisa ukusetyenziswa kokukhanya kwendalo okuvela ngefestile. Ikwanika ukuthungwa okungaphezulu kwisithuba ngokusebenzisa iithayile zendalo ezingwevu eziluhlaza ezinobungakanani obahlukeneyo obu-2 kwitena yokutshintsha kwezitena. Oku kufakwa kumgangatho wonke nakwiindonga zelogumbi lokuhlambela, kwaye yenziwe ngamaqhekeza amnyama-epeyintiweyo, iikholamu kunye nemiqadi, efakwe ipeyinti ekhanyayo ngwevu eluphahleni. Ukongezwa kwezitulo ezibini zomthi kunye nesityalo esikhulu embindini kunika indawo ukufudumala ngakumbi kwaye kuthambise ukujonga okungaphezulu.
Iingcamango ezi-25 eziLungileyo zoYilo lweGumbi lokuhlambela - 57 zoyilo Igumbi lokuhlambela
iiseti zakhe zomtshato
intetho yomtshato mayibe nde
Iindawo ezilungileyo zokutshata eMexico
ngaba abantu bafumana imisesane yokuzibandakanya
ilokhwe yomtshato emhlophe namnyama
Umbono wesipho sikamamazala